Cabdiraxmaan Odawaa ma hadda ayuu mar kale Farmaajo u qiray madaxweynenimo? | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Cabdiraxmaan Odawaa ma hadda ayuu mar kale Farmaajo u qiray madaxweynenimo?
Muqdisho (Dalkaan.com) – Wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Soomaaliya xildhibaan Cabdiraxmaan Odowaa ayaa shalay u muuqday inuu is-hilmaamay markii uu u hambalyeeyey taliyaha ciidamada booliska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole, oo uu Farmaajo u dalacsiiyey darajada Jeneraal.
Liverpool oo Wajaheysa Baaritaano dheeri ah oo Sababi kara Ganaax
Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay wajihi karto baaritaan ku saabsan qeybteedii ugu dambeysay ee baaritaanno been abuur ah oo COVID-19 ah. Ciyaartoyda iyo...
Deg deg Maxaa Ka soo Kordhay Kursigii Xildhibaan ee Loo Boobay...
Wasiir ka tirsanaa xukuumadii Kheyre oo shaaciyey sababta fashilisay wada-hadalladii DF...
Qalbi-Dhagax oo sheegay tallaabo ay qaadayaan kadib go’aankii xukuumada Rooble
Saciid Deni oo ka baxsaday ceeb uu meel fagaare ah ku...